သမုဒ္ဒရာ) သည် ပင်လယ်ရေ၏ အဓိကကိုယ်ထည်ဖြစ်ပြီး ဟိုက်ဒရိုစဖီးယား ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှိနေသော ရေအားလုံးတို့၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းလည်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်၏ ၇၁ ရာခိုင်နှုန်း ကို ပုံမှန်အားဖြင့် သမုဒ္ဒရာအချို့ နှင့် ပို၍ အရွယ်အစားငယ်သော ပင်လယ်တို့ဖြင့် ဖွဲ ...
ဟဒ်ဆန် ပင်လယ်အော်သည် ကနေဒါနိုင်ငံ၏ အရှေ့မြောက်ဘက် တွင်ရှိသော ကုန်းတွင်း ပင်လယ်ကြီး ဖြစ်သည်။ ထိုပင်လယ်အော်သည် အရှေ့ဘက်တွင် ဟဒ်ဆန်ရေလက်ကြားဖြင့် အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာနှင့် ဆက်စပ် လျက်ရှိ၍ မြောက်ဘက်တွင် အာတိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့် ဖောက်ရေ လက်ကြားကြီးဖြင့် လည ...
အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာသည် ကမ္ဘာ ပေါ်ရှိ သမုဒ္ဒရာများ အနက် ဒုတိယမြောက် အကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာမှာ ၁၀၆,၄၀၀,၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာခန့် ရှိပြီး ကမ္ဘာ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို နေရာယူထားပြီး ကမ္ဘာ့ ရေထု၏ ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းခန့် တည်ရှိနေသည်။ နာမည် ...
အနောက်ကမ္ဘာလုံးခြမ်း ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာအား ပထဝီဝင်ရှုထောင့်မှ ပိုင်းခြားခေါ်ဝေါ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ပရိုင်းမီရီဒီယန် ၏ အနောက်ဖက်မှ အန်တီမီရီဒီယန် ၏ အရှေ့ဖက်အထိ ကမ္ဘာတစ်ခြမ်းကို ဆိုလိုသည်။ အနောက်ကမ္ဘာလုံးခြမ်းတွင် အမေရိက၊ ဥရောပနှင့်အာဖရိကတို့၏ အနောက်ဖက ...
အမေရိက ဟူသည် အနောက်ကမ္ဘာလုံးခြမ်းရှိ မြောက်အမေရိက နှင့် တောင်အမေရိက တိုက်နှစ်ခု၏ ကုန်းမြေများကို ပေါင်း၍ ခေါ်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာသစ် ဟူ၍လည်း ခေါ်ကြသေးသည်။ ဆက်စပ်နေသော ကျွန်းစုများကိုပါ ထည့်သွင်းရေတွက်ပါက အမေရိက သည် ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်စုစုပေါင ...
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့ သည် အရှေ့တောင်အာရှ ၁၀ နိုင်ငံ ပေါင်းစည်းဖွဲ့စည်းထားသော နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အသင်းဖြစ်သည်။ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများသည် ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် အာ ...
အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွင် အနောက်အာရှနှင့် အာဖရိကမြောက်ဘက်ပိုင်းဒေသတို့ ပါဝင်သည်။ မကြာခဏ ဆိုသလိုပင် အရှေ့ဖျားဒေသ ၏ ဆန့်ကျင်ဘက် အရှေ့နားဒေသ ဟု သုံးနှုန်းလေ့ ရှိကြသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ၏ သမိုင်းကြောင်းမှာ ရှေးခေတ်ကာလများက စတင်ခဲ့ပြီး သမိုင်းကြောင်းတလျ ...
အာတိတ်ဒေသ သည် မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းတွင် ရှိသည့် ကမ္ဘာ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ ဆန့်ကျင်ဘက်အရပ်သည် တောင်ဝင်ရိုးစွန်းတွင်ရှိသည့် အန္တာတိက ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ၏ အလယ်ဗဟိုကို ဖြတ်သန်းလျက်ရှိသည်ဟု မှန်းဆထားအပ်သော အီကွေတာ မျဉ်းကြောင်းမှ မြောက်လတ္တီဒ် ၆၆° ...
အာဖရိကတိုက် သည် လတ္တီတွဒ်မြောက် ၃၇ံ နှင့် တောင် ၃၅ံ အကြားနှင့် လောင်ဂျီတွဒ် အနောက် ၁၈ံ နှင့် အရှေ့ ၅၁ံ အကြားတွင် တည်ရှိ၍ လတ္တီတွဒ် မြောက် ၁၂ံ နေရာတစ်လျှောက်သည် အာဖရိကတိုက်၏ အကျယ်ဆုံးနေရာ ဖြစ်သည်။ မြောက်မှ တောင်သို့ အလျား မိုင်ပေါင်း ၄၉ဝဝ ရှည်၍ အရ ...
ကမ္ဘာဟောင်း ဟုခေါ်ဆိုကြသော အာဖရို-ယူရေးရှား သည် အရှေ့ကမ္ဘာခြမ်းတွင် တည်ရှိသော ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အကြီးဆုံးသော ကုန်းမြေဖြစ်သည်။ ဆူးအက်ကျွန်းဆက်ဖြင့် ဆက်စပ်နေသော အာဖရိက နှင့် ယူရေးရှား နှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်၍ ခေါ်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ စူပါတိုက် ဟူ၍လည်း ခေါ်ဆိ ...
အာရပ် ဆိုသည်မှာ မျိုးနွယ်စု၊ယဉ်ကျေးမှု သို့မဟုတ် ဘာသာစကားကိုအခြေခံ၍ သတ်မှတ်ထားသော လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ပင် ဖြစ်လေသည်။ အများကိန်းဖြစ်သော Arabs ဆိုသည်မှာ သမိုင်းစဉ်တစ်လျောက် အာရေးဗီးယား ဒေသ တွင်အုပ်စိုးနေထိုင်ခဲ့ကြသော ဆမ်မစ်တစ် မိသားစုဘာသာစကားကိ ...
ဂျပန် တရုတ်နိုင်ငံ ထိုင်ဝမ် တောင်ကိုရီးယား မကာအိုတရုတ်အထူးအုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသ၊ မြောက်ကိုရီးယား ဟောင်ကောင် တရုတ်အထူးအုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသ၊ မွန်ဂိုးလီးယား
အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာ သည် ကမ္ဘာ့ သမုဒ္ဒရာနှင့်စပ်သော နယ်နိမိတ် အပိုင်းအခြားများ၏ တတိယ အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ရေထု ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ကို ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ ၎င်းကို မြောက်ဘက်တွင် တောင်အာရှ၊ အနောက်ဘက်တွင် အာဖရိက အရှေ့ပိုင်း ၊ အရှေ့ဘက ...
အလယ်ခေတ်အစဆီတွင် ဥရောပတိုက်ရှိနိုင်ငံများ၌ ဘာသာရေးကို များစွာ အလေး အမြတ် ပြုခဲ့ကြသည်။ ထိုခေတ်အခါက လက်တင်စာပေ တတ်မြောက်သော ဗရင်ဂျီဂိုဏ်းဝင်ဘုန်းကြီးများနှင့် လူပညာ ရှိများသည် ခရစ်ယန်တရားစာပေတို့ကို ဟောပြောကြလေသည်။ လူအများနှင့် သက်ဆိုင်သော သာသနာရေး ...
ကိုယ်ကျင့်သီလကောင်းခြင်း သည် လူတို့တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဂုဏ်တစ်ရပ် ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ကျင့်သီလကောင်းခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဝါဒဖြစ်သည် ရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာကျင့်ကြံရာ၏။ လူသားတိုင်း ရိုးသားဖြောင့်မတ်ရန် ကိုယ်ကျင့်သီလကောင်းရန် အရေးကြီး၏။ ကိုယ်ကျင့်သီလကောင ...
ကောသလမင်း၏ ဒီဃီတိ မည်သော မိဘုရားကြီးမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိတဲ့အခါ ဒီလို ချင်ခြင်းတောင့်တဖြစ်လာပါတယ်။ နေထွက်သောအခါ ညီညွတ်သော မြေအပြင်မှာ ရပ်ပြီး ချပ်မိန်ညိုကို ဝတ်ထားတဲ့ အင်္ဂါ လေးပါးရှိတဲ့ စစ်သည်ကို ကြည့်ရှုချင်တာရယ် ၊ သန်လျက်ဆေးရေကို သောက်ချင်တာရယ် မျို ...
ခွင့်လွှတ်ခြင်း Forgiveness သည် ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသား သတ္တဝါအားလုံးတို့အား ချမ်းသာကိုပေးတတ်သောတရားဖြစ်သည်။ In Buddhism, forgiveness is seen asapractice to prevent harmful thoughts from causing havoc on one’s mental well-being. Buddhism recognizes th ...
၃၁-ဘုံ အတွက် ငရဲ ၃၁-ဘုံကို ကြည့်ပါ။ ငရဲ ကို များစွာသော ဘာသာတရားများ အရ၊ တမလွန်တွင် ခံစားရန် နေရာဟု အသိအမှတ် ပြုကြသည်။ငရဲသည် မကောင်းမှုပြုခဲ့သူများသာ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ မကောင်းမှုကို ပြန်လည်ခံရသောနေရာ ဖြစ်သည်. ဘာသာအားလုံးနီးပါး၏ တညီတညွှတ်ထဲရှိသည့် သတ ...
ဇိုရိုရက်စထရာဘာသာ သို့ မာဇဒါဘာသာ ဆိုသည်မှာ တမန်တော် ဇိုရိုရက်စတာ၏ ဟောကြားမှုများ အပေါ်တွင် အခြေခံထားသည့် ဘာသာတရား ဖြစ်သည်။ ယခင်အခါက ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကိုးကွယ်သူအများဆုံးသော ဘာသာတရားများတွင် တစ်ခု အပါအဝင် ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပါရှားနိုင်ငံ တည်ရှိရာ နေရာတွင် ဘီ ...
တိဗက်ဗုဒ္ဓဘာသာ သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဩဝါဒခံ ဘာသာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ တိဗက် နှင့် ဟိမဝန္တာဒေသများ၏ စရိုက်လက္ခဏာပါသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကိုးကွယ် ယုံကြည်မှု တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဟိမဝန္တာဒေသများတွင် နီပေါနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ ဘူတန် နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အုရုနာချယ် ပရာဒက်ခ ...
ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပညာရပ်တွင် တစ်ဆူတည်းသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ခြင်း မှလာသည်" တစ်ခုတည်း” - နှင့်" ဘုရား”)သည် ဘုရားတစ်ဆူတည်းသာ ရှိသည်ဟူသော ယုံကြည်မှုဖြစ်သည်။" တစ်ဆူတည်းသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ခြင်း” ၏သဘောသဘာဝသည် ဂျူးအယူဝါဒ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ အစ္စလာမ်နှင့် ဒရုတ်ကဲ့သ ...
တဖုဿနှင့် ဘလ္လိက Taphussa and Bhallika ကုန်သည်ညီနောင်တို့သည် ထူးခြားစွာ ဘုရားရှင်အား ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမဆုံး ဆွမ်းကပ်ရသူ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမဆုံး သရဏဂုံ တည်သူများ နှင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ခဲ့၏။ ဗုဒ္ဓသာသနာသည် မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ဘီစီ ...
တရားရှုမှတ်ခြင်း သည် အရာအားလုံးကို ထိန်းချုပ်လေ့ကျင့်မှု တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ရှုမှတ်ခြင်းဖြင့် လေ့ကျင့်သူသည်" သိစိတ်ပျံ့လွင့်စိတ်”ကို ကျော်လွန်ပြီး စိတ်အနားပေးခြင်း သို့မဟုတ် သိမှတ်နေခြင်း၏ အနက်ရှိုင်းဆုံးသော အဆင့်သို့ ရောက်ရှိရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင် ...
တရုပ်လူမျိုးဘာသာ သည် မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာ+ ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒီ ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူဦးရေ ကျော် ရှိသည့် အနက် ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ခန့်အထိ ကိုးကွယ်ယုံကြည်သော ဘာသာတရား နှင့် အယူဝါဒဖြစ်သည်။ တရုတ်ပြည်သည်ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓဘာသာလူဦးရေ အများဆုံး နိုင်ငံလည်းဖြစ ...
နတ် ဆိုသည်မှာ သတ္တဝါတို့ ကိုးကွယ်အားထားရာ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဆိုသည်။ ဝေါဟာရလိနတ္ထဒီပနီကျမ်း၌ ငါတို့ မြန်မာမှာ နာထသဒ္ဒါကိုရည်၍ ခေါ်ဝေါ်သည်ယူရမည်။ ထိုနာထသဒ္ဒါကား ကိုးကွယ်ရာ အနက်ရသည် မှတ်ရမည် ဟု အဆိုရှိသည်။ ယင်းနတ်သည်လည်း- သမ္မုတိနတ်။ ။မင်း၊ မိဖုရား၊ သားတ ...
နတ်ဘုရားအမျိုးမျိုးတို့ကိုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုသည်မှာ နတ်များ ၊ နတ်သမီးများဟု ခေါ်ဆိုသည့်များစွာသော ဘုရား များကို ယုံကြည်ခြင်းနှင့် သို့မဟုတ် ကိုးကွယ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတို့သည် နတ်ကွန်း များသို့ ပူဇော်ပသမည့် ပစ္စည်းများကို တစ်ပါတည်း သယ ...
နိဗ္ဗာန် ဟူသည် ပါဠိစာလုံး နိဗ္ဗာန ဟူသော ပုဒ်မှ လာသည် ။ ငြိမ်းအေးသည် ဟု ဆိုလိုသည် ။ ထို့ကြောင့် လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ မီးများကို ငြိမ်းသတ်နိုင်ခြင်းသည် နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သည် ။ တဖန် နိဗ္ဗာန ဟူသော ပုဒ်သည် ပါဠိဘာသာ နိ+ ဝါန =နိ နှင့် ဝါန ကို ပေါင်းထားခြင်းဖြစ်သည ...
ဗုဒ္ဓအယူဝါဒအရ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတည်းဟူသော ရတနာသုံးပါးတွင် တစ်ပါးအပါအဝင် ဖြစ်သည့် ရဟန်းသံဃာတော်များကား၊ လူ့လောကတွင် အမြင့်မြတ်ဆုံးတစ်ပါးဟု အသိ အမှတ်ပြု ကြသည်။ ရခဲသော ဒုလ္လဘတရားငါးပါးတွင် မနုဿတ္တဘာဝ ဒုလ္လဘ လူ၏အဖြစ်ကို ရနိုင်ခဲသည်ထက် လူဖြစ်လာသော် လည် ...
မဟာယာနဂိုဏ်း လမ်းစဉ်) သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဓလေ့ထုံးတမ်း၊ ကျမ်းစာ၊ အတွေးအခေါ် နှင့် ကျင့်စဉ်များပါဝင်သော ကြီးမားသည့်ဂိုဏ်းတစ်ခုအတွက် သုံးစွဲသော ဝေါဟာရဖြစ်၏။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အဓိက ဂိုဏ်းကြီးနှစ်ခုမှ တစ်ဂိုဏ်းဖြစ်ကာ အခြားတစ်ခုမှာ ထေရဝါဒ ဖြစ်၏။ မဟာယာနသည် ဘီစီ တစ် ...
ကမ္ဘာ၏ ၅ပုံ ၁ပုံမျှသော သူများသည် အစ္စလာမ် သာသနာဝင်များဖြစ်ကြပြီး လူမျိုးအသီးသီး နိုင်ငံအသီးသီး နှင့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ ယဉ်ကျေးမှုအဖုံဖုံတို့မှလူများပါဝင်ကြပါသည်။ ဖိလစ်ပိုင်တောင်ဘက်ပိုင်းမှသည် နိုင်ဂျီးရီးယား ထိတိုင်အောင်ပင်ရှိ၏။ ထိုသူတို့အားလုံးသည် ...
မေတ္တာဟူသည် မိမိအကျိုး မမျှော်ကိုးဘဲ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကြီးပွားချမ်းသာ ပျော်ရွှင်သာယာဖို့ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းသည်သာ ဗုဒ္ဓဘုရားဟော ဗြဟ္မစိုရ် မေတ္တာ တရားဖြစ်သည်။
ယောဂီ ဆိုသောစကားသည် ယောဂဟူသော သင်္သကရိုက်ဘာသာမှ ဆင်းသက်လာသည့်စကားဖြစ်၍ အစုအရုံး၊ အပေါင်း အသင်း၊ အဖွဲ့အစည်းဟူသော အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ ယောဂီ ပညာသည် ဟိန္ဒူလူမျိုးတို့၏ ဘာသာတစ်ရပ်ဖြစ်ရာ တောရပ်မှီသော ရသေ့ကဲ့သို့ လောကီအာရုံ ကာမဂုဏ်အများကို ချိုးနှိမ်ပယ်ဖြတ ...
ရာမာယဏ သည် သက္ကတ ဘာသာဖြင့်ရေးသားခဲ့သော စွန့်စားခန်း ကဗျာရှည်ကြီးဖြစ်ပြီး ဘီစီ ၄၀၀ နှင့် ၂၀၀ ကြားတွင်ပြန်လည် ပေါင်းစည်း တည်းဖြတ် ထားသည်ဟု ယူဆရသည်။ ရာမာယဏဆိုသည်မှာ "ရာမ"နှင့် "အယာဏ" ဟူသော စကားလုံး နှစ်လုံးကို ပေါင်းစည်း ထားခြင်းဖြစ်ပြီး "ရာမ၏ခရီး" ...
စည်းကမ်းကောင်း၍ ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် လူတို့တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဂုဏ်တစ်ရပ် ဖြစ်သည်။ အဇ္ဇဝ ajjava ဆိုသည်မှာ နုံအခြင်းမဟုတ်ချေ။ ပညာမဲ့ခြင်းမဟုတ်ချေ။ ရိုးသားခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဝါဒဖြစ်သည် Honesty is the best policy ဆိုသော စကားရပ်လည်း ရှိပါသည ...
ရောမကက်သလစ်ဂိုဏ်းသည် ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင် သန်းပေါင်းငါးရာကျော်မျှ သော ခရစ်ယန်တို့ ယုံကြည် ကိုးကွယ်သည့် ခရစ်ယန်အယူဝါဒဆိုင်ရာ ဂိုဏ်းတစ်ခု ဖြစ် သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ တိုင်းပြည်အသီးအသီးမှ လူမျိုးတစ်ရာ တို့အလယ်တွင် ကာလ၊ ဒေသမရွေး ကက်သလစ်ဂိုဏ်းဝင် များကို တွေ့ ...
ကမ္ဘာပေါ်တွင် တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ် မင်းလုပ်လျက်ရှိ ကြသော သမ္မတများနှင့် ဘုရင်အသီးအသီးတို့သည် တိုင်းပြည်၏ အုပ်ချုပ် ရေးတွင် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်များ ဖြစ်ကြသော်လည်း သာသနာရေးဘက်တွင်ကား အာဏာပိုင်များ မဟုတ်ကြချေ။ ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ သာသနာပိုင်များ၊ အယူဝါဒရေး ...
လိပ်ပြာဟူသောစကားသည် ပါဠိဘာသာ အတ္တနှင့်ဇီဝကို မြန်မာပြန်ဆိုထားသော စကားဖြစ်၏။ လိပ်ပြာ ဝိညာဉ်၊ လိပ်ပြာအသက် စသည်ဖြင့် တွဲဖက်သုံးစွဲကြသည်ကိုထောက်လျှင် လိပ်ပြာကို ဝိညာဉ်လည်း ခေါ်သည်၊ အသက်လည်းခေါ်သည်။ ထိုကြောင့် ပါဠိဘာသာ အတ္တ၊ ဇီဝ၊ မြန်မာဘာသာလိပ်ပြာ၊ ဝိ ...
အာရိယန်လူမျိုးစုသည် ဘီစီ၁၇၅၀ ခန့်တွင် အနောက်မြောက်ဖက်မှနေ၍ အိန္ဒိယပြည်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာလေသည်။ ထိုသူတို့သည် ဝေဒ ဘာသာရေးကျမ်းများကို ယူဆောင်လာကြသည်။ ထိုဝေဒကျမ်းများတွင် ကောင်းကင်တွင် နေသောနတ်၊ မြေပြင်တွင်နေသောနတ်၊ သဘာဝကို အုပ်စိုးသောနတ်၊ ခံစားမှ ...
သင်္ကန်းဆိုးရာ၌ အပ်သော ဆိုးရည်တို့မှာ ၁ နနွင်းဥမှတစ်ပါး အမြစ်ဆိုးရည်အားလုံး၊ ၂ထန်းကျင့်၊ ပိန်းနဲနွယ်တို့မှတစ်ပါး ပင်စည်ဆိုးရည်အားလုံး၊ ၃မည်းရွက် ဒန်းရွက်တို့မှတစ်ပါး အရွက်ဆိုးရည်အားလုံး၊ ၄တောက်ရပ်၊ ကြာပိုင်ခေါက်တို့မှတစ်ပါး အခေါက် ဆိုးရည်အားလုံး၊ ...
ရဟန်းတော်တို့၏ အသုံးအဆောင်၊ ပရိက္ခရာ ရှစ်ပါးတွင် သပိတ် သည်အပါအဝင်ဖြစ်၏။ မည်သည့်သပိတ်မျိုးကို ကိုင်တွယ်သုံးဆောင်ရမည်ဟု မပညတ်မသတ်မှတ်မီအခါ ကရဟန်းတော်များသည်လူတို့၏ အသုံးအဆောင်ဖြစ်သည့် အမျိုးမျိုးသောသပိတ်တို့ကို ကိုင်တွယ်သုံးဆောင်ကြသည်။ ထိုကြောင့် ဘ ...
သာသနာ Śāsana မှာ- ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမ တရားတော်များ + ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟောကြားသော" ပိဋကတ်ကျမ်းစာ” လာ အဆုံးအမ တရားတော်များ + ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ သားတော်ရဟန်းသံဃာတော်များ၏ အဆုံးအမ တရားတော်များ ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ဖန်ဆင်းရှင် ကို လုံးဝလက်မခံက ...
ပရိယတ္တိသာသနာ၊ ပဋိပတ္တိ သာသနာ၊ ပဋိဝေဓသာသနာဟူ၍ သုံးပါးရှိ၏။ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူအပ်သော ပိဋကတ်သုံးပုံကို ပရိယတ္တိသာသနာဟုခေါ်၏။ သင်ကြားအပ်သော ပိဋကတ်တော်တို့ကိုသင်ကြား ခြင်းသည် ပရိယတ္တိသာသနာ မည်၏ ဟုဆိုလိုသည်။ မည်သည့်အရပ်မှာမဆို ပိဋကတ် ပေစာ စာအု ...
သုညတ ဝါဒ သည် မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာ ၏ သုညတ ဝါဒ တရား လမ်းစဉ်ဖြစ်သည်။ သည် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ သုညတဝါဒ Sunyata နှင့် မတူကွဲပြားကြောင်း ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ က ဟောကြားတော်မူခဲ့သည်။) သုညတ ဝါဒ Śūnyatā emptiness ...
သောတာပန် ဆိုသည်မှာ သောတာပတ္တိမဂ်ဖိုလ်ကို ရသောသူကို ဆိုလိုသည်။ သောတာပန်တို့သည် ကိလေသာ အညစ်အကြေးဖြစ်သည့် ဒိဋ္ဌိနှင့် ဝိစိကိစ္စာများ မရှိကြပေ။ ထို့ကြောင့် ရတနာသုံးပါးအပေါ် ယုံမှားသံသယများ လုံးဝမရှိတော့သောသူများ ဖြစ်သည်။ သောတာပန်တို့သည် ကံငါးပါးဖြစ်သ ...
သံဃာဆိုသည်မှာ အယူသီလ တူမျှသော ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းအစုကို ဆိုသည်။ ယင်းသံဃာရဟန်းသည်လည်း ဒက္ခိဏေယျသံဃာ သမ္မုတိသံဃာ ဟူ၍နှစ်မျိုးရှိသည်။ ယင်းနှစ်မျိုးတို့တွင် သောတာပတ္တိမဂ်ပုဂ္ဂိုလ်၊ သောတာပတ္တိဖိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်တစုံ၊ သကဒါဂါမိမဂ်ပုဂ္ဂိုလ်၊ သကဒါဂါမိဖိုလ်ပုဂ္ဂို ...
အကျွတ်အလွတ်ပွဲ ဆိုသည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာထုံးစံအရ ဝေမာနိက ပြိတ္တာများအား အလှူပြုပေး၍ အမျှအတန်းပေးဝေကြသည့်ပွဲ ဖြစ်သည်။ ပွဲတော်၌ မကျွတ်မလွတ်သေးသော ဝိဉာဉ်များကို ကျွတ်လွတ်စေရန်၊ ကောင်းရာသုဂတိဘုံသို့ လားရောက်ကြစေရန်အလို့ငှာ ၎င်းတို့ကို တရားဘာဝနာများဟောကြားခ ...
အနိစ္စ anicca, impermanence / inconstancy သည် မမြဲခြင်းသဘာဝကို ခေါ်သည်။ အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ အနိစ္စဆိုတာ ပရမတ္ထတရား ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ဒေသနာဖြစ်နေတော့ နားလည်ဖို့ ခက်ပေမဲ့ နားလည်အောင် ကြိုးစားရမည့်တရားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတရားကိုနားလည် ...
အာနာပါန တရားရှုမှတ် ကျင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းတွင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အထင်ရှားဆုံး နှင့် အကျော်ကြားဆုံး ဖြစ်သည်။ တရားရှုမှတ်ခြင်းသည် အရာအားလုံးကို ထိန်းချုပ်လေ့ကျင့်မှု တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ရှုမှတ်ခြင်းဖြင့် လေ့ကျင့်သူသည်" သိစိတ်ပျံ့လွင့်စိတ် ...
Analysis of variance - ANOVA test ကို စစ်တမ်း သို့မဟုတ် စမ်းသပ်မှုရလဒ်များ သိသာမှုရှိမရှိ ရှာဖွေရာတွင် အသုံးပြုသော သင်္ချာဆိုင်ရာ တွက်ချက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ANOVA test သည် ပြောင်းလဲမှုမရှိသော အယူအဆ ကို ငြင်းပယ်ရန် သို့မဟုတ် အခြားအယူ ...
ကတက်စထြော်ဖီ သီအိုရီသည် ၁၉၆ဝ ပြည့်နှစ်ကမှ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော သင်္ချာဘာသာခွဲ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းဘာသာရပ်ကိုတီထွင်သော ပုဂ္ဂိုလ်မှာ ပဲရစ်မြို့ ရှိ အထက်တန်း သိပ္ပံလေ့လာရေး တက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခသွမ်းဖြစ်သည်။ ကတက်စထြော်ဖီကို တိုက်ရိုက် မြန်မာဘာသာဖြင့် ပြန်ဆိ ...
ဘီယာမတ်ခွက်နှင့်အတူ ရယ်မောနေသော ကောင် ..